Caring for things bringsalot of trouble.
By K in Development on 30 May 2022
Ghost မှာလည်း သူရဲ့ version အလိုက် သွင်းချင်ရင် ghost update ဆိုပြီးသွင်းနိုင်တယ်။ V3 minor သွင်းမှာဆိုတော့ ghost update v3 ပေါ့။…
By K in Rose on 24 Jul 2021
First and foremost, happy anniversary! It was likeayesterday since the day I met you. Time really has flown by since we jumped the Kugane tower together. I guess the saying is true that time really does fly when you're having fun. We've had so many countless moment of…
By K in Rose on 13 Jan 2021
ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက်ရဲ့ ဆုံနိုင်ခွင့်က ဒီထက်မပိုခဲ့ပေမယ့် ကျွန်တော့်အတွက်ကတော့ အနေဝေးလည်း စိတ်ချင်းနီးစပ်နေသ၍၊ ခံစားချက်တွေ ထပ်တူကျနေသေးသ၍ကတော့ အကွာအဝေးဆိုတာ အရေးကြီးတဲ့အတိုင်းအတာ ယူနစ်တစ်ခုတော့လည်း မဟုတ်ပါဘူး။…
By K in Throwback on 28 Dec 2020
၂၀၂၀ စာအုပ်တွေပိုပြီးတော့ ဖတ်ဖြစ်လာတယ်။ Kalimba ကိုလည်း အနည်းငယ်တော့ တီးတတ်လာခဲ့တယ်။ Piano ဖက်ကိုလှည့်ချင်ပေမယ့် ၂၀၂၁ ရောက်မှပဲ စတော့မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ထားတယ်။ ပုံပြန်ဆွဲချင်…
By K on 07 Nov 2020
Dear me, I am sorry that you tried so desperately to fix others, when your own hands were shaking. I'm sorry that I didn't give you enough time to heal, that I let you seal the wounds of everyone else while your own were bleeding. I'm sorry that there were…
So, I went back to Eorzea
By K in MMORPG on 15 Apr 2019
World of Warcraft ကို ဆော့ရတာ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ပျင်းဖို့ကောင်းလာတာနဲ့ နောက် raid မလာခင်အထိ တခြား MMO တွေကို အပျင်းပြေ ပြောင်းဆော့ကြည့်မယ့်ဆိုပြီး AION, Black Desert Online, TERA နဲ့ တခြားအသစ်တွေပါ…
Why I've switched to Atom?
By K in Development on 18 Dec 2018
Myanmar Links မှာကတည်းက code editor အနေနဲ့ Sublime Text ကို သုံးလာတာ အခုဆိုရင် (၇)နှစ် လောက်တောင်ရှိပြီထင်တယ်။ ဒီကြားထဲ တခြား Editor အသစ်တွေအများကြီးထွက်လာခဲ့ပေမယ့် စမ်းသုံးကြည့်တယ်။ ဒါပေ…
World of Warcraft:7MMORPG:6Download:3Scandal Band:3Development:3Guide:3Music:3Review:2Throwback:2Rose:2fuelphp: 1 LINE: 1 Linux: 1 Mighty Morphin: 1 ghost: 1 mongodb: 1 FPS: 1 Miku: 1 News: 1 ragnarok: 1 Otome: 1 memories: 1 Lookback: 1 Power Rangers: 1 node.js: 1 meiko shiraki: 1 reborncms: 1 SCANDAL: 1 ragnarok2: 1 Overview: 1 Mobile: 1 Naruto: 1 kongoku gakuen: 1 ro2: 1 figurine: 1 FATE: 1 PS4: 1